China Leafless Bvudzi Dryer WY601 Kugadzira uye Fekitori | AOLGA
Iyo-yakasimbiswa ine simba isina bhurasho-nhanhatu-mota mota yakabatanidzwa mune yekunze mhango dhizaini yeAolga isina mashizha bvudzi dryer inoburitsa mhepo ine simba. Inofananidzwa neyechinyakare bvudzi rinoomesa bvudzi chete patembiricha yepamusoro pasina mhepo inoburitsa, AOLGA isina mashizha bvudzi rinoomesa zvinobuda panenge pegumi nerimwe dutu redutu kuti riome bvudzi uye rinotadzisa bvudzi kurasikirwa kubwinya uye bifurcate yakaitika nekupisa kwekushisa kurasikirwa kuburikidza nekukiya hunyoro hwebvudzi uye ganda romusoro panguva imwe chete, iro rinonyanya kushanda uye rinobatsira kune vanhu vane vhudzi rakapendwa kana kubvumidzwa!
Bvisa bvudzi pfupi revarume mumasekondi makumi matatu, uye bvudzi revakadzi mumaminetsi matatu.
O-yakaumbwa kupisa waya uye yakasarudzika yekudziya waya dhizaini iyo inoita kuti iite zvakanyanya zvakaenzana kupisa
Yakasanganiswa neakasarudzika mweya mweya wedhodhi, kupisa kunogovaniswa zvakaenzana, kuchidzivirira kuwanda kwemuno kwekupisa nekukuvadza bvudzi.
Kudzivirirwa kwekudziya mudziyo kunoita kuti bvudzi rinoomesa rangoerekana radzima kana pakaitika kupisa, zvichikupa mushandisi wakachengeteka uye usina hanya.
Anion chengetedzo (sarudzo) kuburitsa anion yeakanyanya mafesi inobvisa static magetsi uye kusiya bvudzi rakatsetseka uye riine hutano.
Akangwara kugara tembiricha:
Akangwara tembiricha yekudzora tekinoroji inobatsira kupisa zvakaenzana zvakagovaniswa pamusoro peganda rekudzivirira bvudzi remuno rakaoma kubva pakurasikirwa nehunyoro nekuda kwekuunganidzwa kwekupisa, zvichikonzera kukuvara kwebvudzi. Uye zvakare, kutenderera kwemhepo panguva yekudziya kunodziya zvakapoteredzwa uye kunounza kugadzikana kwemhepo kunzwa.
Inesimba mota isina brushless:
Yazvino-gadzira matatu-chikamu brushless mota, yakakwira simba 1500W uye hupenyu hwakareba hwebasa, inogona kuburitsa inokwira-kumhanya uye yakadzikama yemhepo pa30M / s nemhepo yakasimba yechisikigo kubva pasi pechibato. Kukurumidza kuomesa neakaderera mweya vhoriyamu kurasikirwa uye kutora shoma nguva.
Isina mashizha-Yekumhanyisa Bvudzi Dryer
Metallic pfumbu uye Tsvuku
Brushless matatu-chikamu mota, Yakakwira inotenderera kumhanya pa1,000, Tatu tembiricha sarudzo: 75C ° / 67C ° / 57C °, Nhatu yekufambisa mweya kumhanya: 56km / h, 47km / h, 42km / h, Nguva dzose tembiricha yekuchengetwa kwebvudzi, Kuchengetedza kupisa, Gumi mamirioni anion, Ruzha rwemhepo: 80-82db, Simba: 1500W
Pashure: Bvudzi Dryer RM-DF06
Zvadaro: Zvingangoitika Electric Scale B1710
Ac Mota Bvudzi Rinomesa
Bvudzi Rakachena Rinomesa
Yakaomeswa Bvudzi Dryer
Cordless Bvudzi Dryer
Magetsi Anion Bvudzi Dryer
Magetsi Bvudzi Dryer
Bvudzi Riridze Dryer
Bvudzi Kuomesa Muchina
Bvudzi Dryer Set
Hooded Bvudzi Dryer
Kupisa / Kutonhora Mhepo Bvudzi Rinomesa
Ionic Bvudzi Dryer
Isina Mashizha Yekumhanyisa Bvudzi Dryer
Mini Bvudzi Dryer
Bvudzi rinotakurika Dryer
Rine Simba Bvudzi Dryer
Akanyarara Bvudzi Dryer
Rechargeable Bvudzi Dryer
Simuka Bvudzi Dryer
Kufamba Bvudzi Dryer
Wall Bvudzi Dryer
Wireless Bvudzi Dryer